ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဂိုးသမား၌သင်တို့၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်သစ်သီးသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်သိုလှောင်! ဤသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဂိုးသမားထူးခြားသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအတွက်လတ်ဆတ် longer.We ကွဲပြားခြားနားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဂိုးသမားစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်နှင့် shape.Also ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာသိုလှောင်မှုများ set.You တစ်ဦးချင်းစီအမိန့်သို့မဟုတ်3ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်သဏ္ဌာန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဂိုးသမားအပါအဝင်တစ်ခုလုံး set.A ကွန်တိန်နာထားနိုင်ပါတယ် သင်အလိုရှိလျှင်ပိုလတ်ဆတ် longer.Results အသီးအနှံနှင့်အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားစေခြင်းငှါဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, သစ်သီးများနှင့် more.Keeps အသီး, ဆလတ်, နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဘို့အ us.Perfect ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဂိုးသမားနှင့် Saver နှင့်အတူ% ပိုရှည် 80 မှလတ်ဆတ်တဲ့အထိထုတ်လုပ်ထားပါ။ ၎င်း၏ built-in လတ်ဆတ်တဲ့အပေါက်တွေအဖုံး filter ကိုဤဿုံအရွယ်အစားအစာကွန်တိန်နာလတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ကြာကြာ-တည်တံ့အသီးအနှံထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်များကိုအောက်ဆီဂျင်၏စီးဆင်းမှုနှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုထိန်းညှိနှင့်အတူကုန်စုံစတိုးဆိုင်နည်းပါးလာခရီးစဉ်နှင့်ထို့ထက် ပို. ငွေစုကိုဆိုလိုပါတယ် မင်းအတွက်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဂိုးသမားအစားအစာသိုလှောင်မှု set ကို
Clear ကို + အစိမ်းရောင်
17.5 * 16.2 * 10.6cm
2000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
စက္ဏူထူနှုန်း 12 pc
ကျနော်တို့3ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဂိုးသမားအစားအစာသိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာ3။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဂိုးသမားနှင့် Saver နှင့်အတူ% ပိုရှည် 80 မှလတ်ဆတ်တဲ့အထိထုတ်လုပ်ထားပါ။ ၎င်း၏ built-in လတ်ဆတ်တဲ့အပေါက်တွေအဖုံး filter ကိုနှင့်အတူဤဿုံအရွယ်အစားအစာကွန်တိန်နာလတ်ဆတ်တဲ့အသီးအနှံထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်များကိုအောက်ဆီဂျင်၏စီးဆင်းမှုနှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုထိန်းညှိ။
လတ်ဆတ်တဲ့ပိတ်ဆို့အဖုံး filter ကို:
၎င်း၏ built-in လတ်ဆတ်တဲ့အပေါက်တွေအဖုံး filter ကိုဤဿုံအရွယ်အစားအစာကွန်တိန်နာလတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ကြာကြာ-တည်တံ့အသီးအနှံထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်များကိုအောက်ဆီဂျင်၏စီးဆင်းမှုနှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုထိန်းညှိနှင့်အတူကုန်စုံစတိုးဆိုင်နည်းပါးလာခရီးစဉ်နှင့်ထို့ထက် ပို. ငွေစုကိုဆိုလိုပါတယ် မင်းအတွက်။ သငျသညျအစားထိုးမဝယ်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်၏လုပ်ရတဲ့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ဘယ်တော့မှဒါအဆိုပါ filter တစ်ဦးတစ်သက်တာကြာရှည်ခံသည်။ ထိုအခါအောက်ခြေမှမြင့်မားသောကြည်လင်ပြတ်သားစွာ Tray ထဲမှာ, အစိုဓာတ်ကိုကွာစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည် sogginess ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် crisper ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးအပွအတူသင်တို့ထွက်ခွာ။
သတိပေးချက်နှင့် CAUTION:1.Do မီးဖိုသို့မဟုတ်ခရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာမသုံး။
8 Piece BPA အခမဲ့လုံစားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာသတ်မှတ်မည်
8 Piece BPA အခမဲ့လုံစားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာသတ်မှတ်မည်♦ 8 Piece သတ်မှတ်မည် Air ကိုနေရာမှာလည်းစားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာ .......
5 Piece လုံ acrylic သေတ္တာကလေးသတ်မှတ်မည်စားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာ
5 Piece လုံ acrylic သေတ္တာကလေးသတ်မှတ်မည်စားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာ♦5Piece သတ်မှတ်မည် Air ကိုနေရာမှာလည်းစားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်မှု ......
တံဆိပျကိုအဖုံးနှင့်အတူပလတ်စတစ်လုံစားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာ♦6Piece သတ်မှတ်မည် Air ကိုနေရာမှာလည်းစားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာ .......
အဖုံး♦6Piece သတ်မှတ်မည် Air လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူလုံစားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာသတ်မှတ်မည်နေရာမှာလည်းစားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာ။ ♦ Keep ......
သကြား, လက်ဖက်ရည်, ကော်ဖီ, ဆန်စပါး, ခေါက်ဆွဲစသည်တို့ကိုလုံ Lids နှင့်အတူအဘို့အပလပ်စတစ်စားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်အိုးသေတ္တာကလေးသတ်မှတ်မည်စံပြ ......